मेरो नाम आएन
1 नोभेम्बरदेखि 30 सम्म
मेष : यो महिना तपार्इंको लागी समान्य सुख साथै सफलता मिल्ने समय देखिन्छ। महिनाको मध्यभागमा केही दुखद घटनाको आगमनले दुखी चिन्ताग्रस्त समय देखिन्छ। शनिको कारण विनाकाम यात्रा वाद-विवादले पनि दुखी बनाउनेछ। व्यापारी वर्गको लागी पनि समय सामान्य रहने देखिन्छ। पैतृक सम्पति मिल्ने तर आफ्ना आफन्तमा वाद-विवाद हुने विवादकारी योग देखिन्छ। रोजी रोजगारी उच्च मध्ये निम्न वर्गका व्यापारीहरूका लागी लाभकारी समय देखिन्छ। लेखक, पाठक, साहित्यकार, शिक्षक, विद्यार्थी नव युवा-युवती अरूको सेवा गर्ने सेवादार कामदार यान-वाहन, भूमि भवन आदि क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको लागी समय सामान्य रहने देखिन्छ। होशीयार रहने यो महिनाका अशुभ ता. 2, 6, 8, 12, 16, 20, 22, 26, 30, शुभरंग रातो सुन्तला, अशुभ कालो।
वृष : यो महिना तपार्इंको लागी लघु कल्यान शनिको अढैयाले गर्दा विशेष सावधानीपूर्व कार्य गर्नुपर्नेछ। परिश्रम भन्दा कम द्रव्य लाभ, नारी वर्गको लागी पनि निर्वाह हुने मात्रै आय आर्जन मिल्नेछ। व्यापारीवर्गको लागी कार्यक्षेत्रमा तलमाथि भइरहनेछ। आफ्ना आफन्तमा वाद-विवाद विनाकारण झगड़ा आदिले मन अशान्त रहनेछ। ऋृणरोग, भय लाग्नेछ। घरमा हनुमान स्त्रोत, सर्वारिष्ट निवारण खण्ड गर्नुपर्ने समय देखिन्छ। सबै वर्गका रोजी रोजगारी, मध्येव्यापारी, लेखक-पाठक, साहित्यकार, शिक्षक, विद्यार्थी, गृहस्थी, साधुसन्त, योगीमहन्त, पण्डित-पुरोहित सबैवर्गलाई समय सामान्य रहने देखिन्छ। होशियार रहन पर्ने यो महिनाका अशुभ ता. 2,5, 7, 9, 13, 14, 20, 21, 23, 30, शुभ रंग सेतो इन्द्रेणी अशुभ रातो पहेंलो।
मिथुन : यो महिना तपार्इंको लागी धेरै कामको व्यस्तताले गर्दा घर परिवारमा समयको कमी रहने देखिन्छ। पति-पत्नीमा मतभेदको स्थिति आउनेछ। भौतिक सुख मिल्ने पनि मन अशान्ति हुनेछ। वाणीमा केही होशीयारपूर्वक बोल्ने, क्रोधमा कुनै कामको निर्णय लिन ठूलो भूल हुनेछ। रोजी रोजगारी मध्येव्यापारी, किसान, मजदुर, ठेकादार, जलपान आदि। सरकारी नोकरी गर्नेहरूको लागी समय सामान्यभन्दा लाभकारी हुने देखिन्छ। होशीयार रहनपर्ने यो महिनाका अशुभ ता. 1, 4, 7, 10, 16, 17, 22,24, 28, 29, शुभ रंग हरियो गहूँ, अशुभ सेतो।
कर्कट : यो महिना तपार्इंको लागी साझेदारीको काममा गरेको लगानीमा केही वाद-विवाद साथै हानीको सामना गर्नुपर्नेछ। इष्टमित्र आफ्ना आफन्तमा मनमुटावको स्थिति हुनेछ। बुद्धि भ्रमित रहने कारण काममा सोचविचार गरी अगाड़ी बढ्‌नुपर्नेछ। महिनाको मध्येउत्तरार्धमा कलाकार, चित्रकार, रिपोर्टर आदिहरूको लागी समय केही सफलता पूर्वक अगाड़ी बढ्‌ने देखिन्छ। सरकारी नोकरी, समाजिक कार्यकर्ता, राजनेताहरूको लागी मानसम्मान पद-प्रतिष्ठा बढ्‌ने समय देखिन्छ। अन्न-धन्न कपड़ा लत्ता साझ सज्जा आदि क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको लागी समय लाभकारी हुने देखिन्छ। शुभकामको लागी यो महिनाका शुभ ता. 3, 6, 9, 12, 16, 18, 24, 28, 30 शुभ रंग सेतो घीउ, अशुभ कालो।
सिंह : यो महिना तपार्इंको लागी घरमा खुशीको खबर, पितापक्षबाट सहयोगले कुनै रोकिएको काम अगाड़ी बढ्‌नेछ। स्वास्थ्य सम्बन्धि केही सावधानीपूर्वक अगाड़ी बढ्‌ने। गृहस्थी कार्यप्रति रूचि बढ्‌ने, स्वजनको पनि केही सामान्य सहयोगको आशा राख्न सकिने देखिन्छ। खेलाड़ी वर्गको लागी धेरै परिश्रमले मात्रै लाभ मिल्नेछ। कामको व्यस्तताको कारण स्वास्थ्यमा केही गड़बड़ी हुने, नेत्र छाती आदिको रोगले सामान्य दुःख दिनेछ। रोजीरोजगारी, मध्यव्यापारी, गृहस्थी, लेखक, पाठक, साहित्यकार आदि कुनै पनि क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको लागी समय सामान्य देखिन्छ। शुभकामको लागी यो महिनाका शुभ ता. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 22, 24, 27, 30, शुभरंग रातो मेरूण, अशुभ कालो।
कन्या : यो महिना तपार्इंको लागी सामाजिक कार्यकर्ताको लागी समय मानसम्मान पदप्रतिष्ठा बढ्‌ने अर्थलाभको समय देखिन्छ। कृषक वर्गको लागी हानी हुनेछ। घर परिवार, पति-पत्नीमा वादविवाद हानीकारक हुनेछ। व्यापारी वर्गको लागी साहस पराक्रमले अगाड़ी बढ़े अवश्य लाभ मिल्नेछ। मनमा शुभविचारको उदय भए पनि भोग विलासितामा रूची हुने कारण दाम्पत्य जीवनमा तलमाथि हुनेछ। घरमा मांगलिक कार्यका खबरले मनमा उत्साह खुशीको समय देखिन्छ। रोजी रोजगारी, मध्येव्यापारी, जलपान, भूमि भवन, यानवाहन, आदि रुपियाँ-पैसाको लेनदेन गर्नेहरूको सबै वर्गलाई सामान्य रहनेछ। शुभकामको लागी यो महिनाका शुब ता. 4, 6, 8, 11, 14, 19, 20, 25, 30, शुभ रंग हरियो गहूँ, अशुभ सेतो।
तुला : यो महिना तपार्इंको लागी कष्टप्रद यात्राको समय देखिन्छ। गुप्त शत्रुको वृद्धि, धेरै परिश्रमले अल्पलाभ हुनेछ। पारिवारिक उत्तरदायित्वको निर्वहन गर्नुपर्ने समय छ। एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोपको कारण मुद्दामामिला चोटपटक आदिको भय हुनेछ। ऋृणको लेनदेनबाट बाँच्नु पर्नेछ। रोजी रोजगारी, मध्येव्यापारी, गृहस्थी, लेखक पाठक, साहित्यकार, आदि क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको लागी समय सामान्य रहनेछ। होशियार रहन पर्ने यो महिनाका अशुभ ता. 1, 2, 5, 9, 10, 12, 14, 18, 20, 26, 27, शुभरंग इन्द्रेणी छिर्के-मिर्के, अशुभ रातो पहेंलो।
वृश्चिक : यो महिना तपार्इंको लागी आफ्ना आफन्तमा विवाद जलभय कम्मर पीड़ा भोजन सयनमा वाधाको कारण शरीर रोगी नृपमान भङ्ग हुने समय देखिन्छ। आँधी व्याधीले गर्दा धनर्जन मानसम्मानमा हानी गराउने समय देखिन्छ। महिनाको मध्येउत्तार्धमा मित्र साथै उच्चपदाधिकारीको कृपा दृष्टिले रोकिएको काम हुने स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ। राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता ठेक्का-पट्टाका काम गर्नेहरूको लागी लाभकारी समय आउनेछ। अतिथ्यको सेवा गरे लाभ मिल्ने देखिन्छ। रोजी रोजगारी मध्येव्यापारी लेखक, पाठक क्रेता, विक्रेता, यानवाहन, भूमी भवन आदि क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको लागी समय सामान्य भन्दा लाभकारी हुने देखिन्छ। शुभकामको लागी यो महिनाका शुभ ता. 3, 4, 5, 9, 12, 13, 20, 21, 25, 29, शुभरंग रातो मेरूण, अशुभ पहेंलो।
धनु : यो महिना तपार्इंको लागी सरकारी कर्मचारीहरूको लागी पदोन्नति मिल्नेछ। सामाजिक कार्यकर्ताहरूको लागी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिल्नेछ। नयाँ-नयाँ काम रूची बढ्‌नेछ। आफ्ना आफन्त इष्टमित्रमा केही मनमुटावको स्थिति आउने देखिन्छ। यात्राकारी योग पनि आउने देखिन्छ। व्यापारी वर्गको लागी लाभ खेती किसानको लागी हानी, यान-वाहन आदि क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको लागी पनि समय लाभकारी छ। साधु-सन्त, योगी महन्त, पण्डीत, पुरोहित, डाक्टर विमारी, जलपान, औषधिमूलो आदि क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको लागी लाभकारी समय देखिन्छ। शुभकामको लागी यो महिनाका शुभ ता. 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 20, 24, 27, 28, शुभरंग पहेंलो गेरूवा, अशुभ कालो निलो।
मकर : यो महिना तपार्इंको लागी जीव जन्तु पशु-पंक्षी आदि क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको लागी लाभ मिल्नेछ। विश्वासीवर्गबाट धोका मिल्नेछ। विद्यार्थी वर्गको लागी समय परिश्रम अनुसार राम्रो फल मिल्नेछ। पत्नीपुत्रको चिन्ताले केही सताउनेछ। विरोधीहरूको पनि चिन्ताले सताउनेछ। व्यापारीवर्गको लागी कार्यक्षेत्रमा चिन्ताले सताउनेछ। आफू खुशी कार्य गर्नेहरूको लागी सावधानीपूर्वक गर्नुपर्नेछ। आय आर्जनमा केही ध्यान दिनुपर्नेछ। रोजी रोजगारीमध्ये व्यापारी, लेखक पाठक, साहित्यकार, लोहा-लक्कर, माटो ढुंगा-गिटी, बालुवा आदि क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको समय लाभकारी छ। शुभकामको लागी यो महिनाका शुभ ता. 3, 4, 5, 12, 13, 18, 20, 24, 26, 30, शुभ रंग निलो कालो मैलो, अशुभ सेतो पहेंलो गेरूवा।
कुम्भ : यो महिना तपार्इंको लागी आफ्नो आफन्तबाट धोका मिल्नेछ। व्यापारमा साझेदारीमा गरेको काममा हानी हुनेछ। वौद्धिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ। कुनै नयाँ कामको श्रीगणेश हुनेछ। नयाँ मित्रबाट सहयोग मिल्ने साथै रोकिएको काम अगाड़ी बढ्‌नेछ। घर परिवार छर-छिमेकीमा सुख-दुःख सामान्य रहनेछ। पशु-पंक्षी, गाई, भैंसी, कुकुरा आदिको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको लागी लाभ मिल्नेछ। लोहा-लक्कर, काठ, कोइला पानी सम्बन्धी क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको लागी पनि समय लाभकारी देखिन्छ। रोजी रोजगारी, मध्ये व्यापारी, लेखक, पाठक, साहित्यकार, स्कूल, कलेज, शिक्षक, विद्यार्थीहरूको लागी समय सामान्य रहने देखिन्छ। पत्रकार, चित्रकार, सुचीकार, डाक्टर, विमारी, औषधिमूलो आदिको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको लागी समय सामान्य लाभ मिल्नेछ। शुभ कामको लागी यो महिनाका शुभ ताः 1, 2, 3, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 27, 28, शुभ रंग निलो कालो आकाशे, अशुभ रातो-पहेंलो, गेरूवा।
मिन : यो महिना तपार्इंको लागी आर्थिक स्थितिमा केही सुधार हुने साथै रोगीहरूमा केही आराम मिल्ने समय देखिन्छ। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। रोकिएको धन मिल्नेछ। घर परिवार विषयमा केही शान्ति मिल्नेछ। क्रोध र छिटो निर्णय गरेको काममा हानी हुनेछ। बाबुआमा, गुरु, साधु-सन्त योगी महन्त पण्डीत पुरोहितको सेवा गरे अवश्य लाभ मिल्नेछ। रोजी रोजगारी, मध्येव्यापारी, लेखक, पाठक, साहित्यकार, शिक्षक, विद्यार्थी, धामी-झाँकी, डाक्टर, वैद्य महन्त सबै वर्गको लागी समय सामान्य रहने देखिन्छ। होशीयार रहने यो महिनाका अशुभ ता. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 19, 20, 25, 26, 29, 30, शुभ रंग पहेंलो गेरूवा, अशुभ कालो मैलो।
गोर्खा जातीय सांस्कृतिक सुरक्षा एवं उत्थान एक दिवसीय सांस्कृतिक प्रदर्
राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2020 संक्षिप्त परिचय
संस्कृति बाँचे जाति बाँच्छ
पिपिएस अनि अलग राज्य कहिले हुने?
आश्वासनको छहारीमुनि ओइलाएका चियाबारीहरू
पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम
गोर्खाल्याण्ड हाम्रो निम्ति नफल्ने बनतरूल सिद्ध भयो
01पिपिएस अनि अलग राज्य कहिले हुने?
021 नोभेम्बरदेखि 30 सम्म मेष : यो महिना तपार्इंको लागी समान्य सुख साथै सफलता मिल्ने समय देखिन्छ। मह
03मिजोरमको संगीतमय संसारमा रमाउँदै
04मेरो नाम आएन
05पहाड़को विकासको निम्ति एकसाथ बस्न मुख्यमन्त्रीको आह्वान
17 01:21:14 Jan 2022